Mid ka mid ah xiddigaha khadka dhexe ee Liverpool oo difaacay qaladkii foosha xumaa uu sameeyay goolhaaye Adrián – Gool FM
(England) 19 Agoosto 2019. Mid ka mid ah xiddigaha khadka dhexe ee kooxda Liverpool ayaa difaacay qaladkii foosha xumaa uu sameeyay goolhaaye Adrián inta lagu gudi jiray kulankii Southampton ee horyaalka Premier League.
Goolhaayaha reer Spain ee Adrián ayaa qalad fool xun ku horsameeyay xiddigaha Southampton, kaddib markii uu lugtiisa ku dhiibtay kubad, waxaana gool u badalay Danny Ings.
Wargeyska “Daily Express” ee dalka England ayaa wuxuu daabacay wareysi uu xiddiga reer Holand ee Georginio Wijnaldum uu ku difaacay saaxiibkiis Adrián waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Noocan oo kale ah waxay ku dhacaan goolhayaha, Sannadkii hore waxay sidaan oo kale waxay ku dhacday Alisson Becker kulankii aan la ciyaarnay Leicester City, sidoo kale kulamadii diyaar garowga”.
“Waxaan u maleynayaa in jawaab celinta Adrian inay ka muhiimsan tahay qaladkan oo kale, qof walba qalad ayuu sameyn karaa xitaa goolhayaha”.
“Qof walba wuxuu u baahanyahay waqti si uu ula qabsado, wuxuu kooxda u ciyaaray isla markii uu ku soo biiray, marka waa inaan la qabsanaa midkeen kan kale”.
Si kastaba ha noqotee, goolhaaye Adrian ayaa yimid kooxda Liverpool suuqan xagaaga, wuxuuna ku yimid beeca xurta ah kaddib markii uu baxay Simon Mignolet, isagoo olalahiisa Reds ka bilaabay kulankii daahfurka horyaalka Premier League ee Norwich City kaddib markii uu dhaawacmay Alisson Becker, wuxuuna sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaray ciyaartii finalka ee UEFA Super Cup ay kaga guuleysteen.